Ngaba i-Spider-Man ingumJuda kwiVerse-Verse? Le Montage icebisa njalo - Iimuvi
Eyona Iimuvi Yima, ngaba iSigcawu-sendoda singumJuda 'Kwivesi yesigcawu'?
Ngaba uPeter Parker ungumYuda?Isony
NjengomJuda, ndiyakuthanda ukufumanisa kwaye ndazise ngokuzingca ukuba ngoobani abadumileyo abazimanya nam minyaka le ekukhanyeni i-menorah. Ayisoloko iluhlobo lwethu ukubonisa ubabalo lwesilivere ngendlela enkulu eqhelekileyo, ke ngalo naliphi na ixesha uScarlett Johansson okanye UJake Gyllenhaal vela, abahlobo bam bayazi ukuba balindele i-spiel eyazi konke kum malunga nobukhokho babo.
Lo mnqweno wokumelwa kunye nokwamkelwa, ungcwatyelwe nzulu ngaphantsi kweminyaka eliwaka yentshutshiso yembali, ifikelela nakubalinganiswa abaliqela. Ngaphandle kwezenzo zakhe ezimbi, andinakunceda kodwa ndivelane noMagneto, owayesinde kwi-Holocaust kudala ngaphambi kokuba abe yi-arch nemesis ye-X-Men. Nangona kungazange kubekho fan enkulu ye Ezine ezigqibeleleyo , Ndandichulumancile kukubona ilitye Lento i kippah kunye nerefu emtshatweni wakhe ekuqaleni kwalo nyaka. Njengabantu, khange sibe neninzi ye-blockbuster pop culture, ngoko ke ukongezwa kuluhlu olukhulayo kuhlala kwamkelwa.
Kungenxa yoko le nto kufuneka ndolule isikhalo esivela entliziyweni Ixhalanga lika-Abraham Riesman , Oqaphele inkcukacha eziphambili malunga noJake Johnson kaPeter B. Parker kwizinto ezintle ezintle Indoda yesigcawu: Kwi Isigcawu-Vesi , umzuzwana ndiphose la macebo kwiingcambu zenkolo ezinokubakho zomlinganiswa.
Umboniso bhanyabhanya-othi, ukuphindaphinda, kuhle -Ukuhlanganisa abantu abasesigcawini abavela kuyo yonke imilinganiselo eyahlukeneyo ukunceda abakhasayo abasebenza ngobuso obutsha kunye nomlingisi ophambili uMiles Morales (uvakaliswe nguShameik Moore). Omnye waba bantu ba-Spidey ngu-Peter B. Parker, umlindi osele ekhulile okhulile kwi-career yakhe njengeqhawe njengoko ubomi bakhe buye bahlukana. Ngexesha lokuphinda ubomi bakhe, sikhawuleza ukumbona etshata nesithandwa sakhe uMary Jane Watson njengoko egxobhoza iglasi esongelwe ngelaphu, neliza kuthathwa nangowuphi na umJuda njengesiko lakudala lesiHebhere elalisusela ekubhalweni kweTalmud emva phaya ngo-500 CE .
Bamba ifowuni-ngaba uPeter B. Parker ungumJuda? Impendulo emfutshane: UngumJuda ngokwaneleyo ukuba ndiyamongeza kuluhlu.
Kwenzeka ukuba ndikholwe, ngenxa yezizathu ezininzi, zokuba uPeter B. Parker kungenzeka ukuba ungumJuda, umlawuli-kunye no-Rodney Rothman uxelele uRiesman. Ngokwam, ndikhulele eForest Hills, eQueens — kubumelwane bukaParker- kwaye ndingumJuda, ke mhlawumbi ndiyazibonisa.
Ndiyazi ukuba amanye amalungu esizwe axhumaxhuma luvuyo ngoku (kwaye asaziwa ncam ngamandla ethu okuxhuma). Nangona kunjalo, kukho i-caveat apha ekufuneka siyamkele kuqala.
Ndiza kuthi, kuba le yindalo enye, asazi nje, wongeza uRothman. Kungenzeka ukuba amaBuddha anyathele iglasi. Inokuba uMJ ungumJuda kwaye uPeter waguquka… Nangona kunjalo, loo milisecond yemifanekiso yayinenjongo.
Ndandinayo eyam ithiyori kwaye ndandiyinyani kanene ngayo, utshilo uRothman. Ndandihlala nje ndizixakekisa ngabantu, kodwa ndingathi, ‘Uyazi uSigcawu-mntu ungumJuda, andibi kunjalo? Xa wayethetha le nto, uRothman wayibiza njengeSpiderm’n, njengoko umntu wayenokwenza namagama amaninzi ama-Ashkenazi angamaYuda-njengoRothman, umzekelo.
Enye indalo okanye akunjalo, sibanga uPeter B. Parker njengomnye wethu kwaye siphosa ipati. Ungalindelanga ukuba sisele nayiphi na iwayini ye-manischewitz kuyo.
Ingxelo ye-NBC kaMat Lauer ichaza 'Iqhosha Lomnyango,' Iingxabano zika-Ann Curry
'Ijoni elihamba ngenqanawa' laseFrance liba kwindawo ebonakalayo ngeHoverboard yokwenyani
Yintoni eyenzekileyo ngokwenene: UBernie Sanders Uphikisa iNcwadi kaHillary Clinton
‘Ibali laseHorry laseMelika: Ihotele’ Ixesha leLatecap Ixesha lesi-5 sokuGqibela: Imicimbi yoSapho
yimalini molo intsha ye-2
bendicinga ukuba kukho isipho esinye sobuxoki
yeyiphi eyona pilisi ityiwayo yokunciphisa umzimba
Unyango lwasekhaya losulelo lwebacteria
Athini amazwekazi omhlaba